ဘက်စုံသုံးရေစိုခံနိုင်သည့်အမျိုးသားများအတွက်ခရီးသွားအိတ် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မဆောင်ပါ WoopShop®
$48.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $97.99
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / လူမည်း တရုတ် / Black က ယူနိုက်တက်စတိတ် / မီးခိုးရောင် တရုတ် / မီးခိုးရောင်
ဘက်စုံသုံးရေစိုခံနိုင်သည့်အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားသောအိတ် - ယူနိုက်တက်စတိတ် / အနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
item အကျယ်: 29inch
item အလျား: 53inch
item အလေးချိန်: 1.3kg
item အမြင့်: 27inch
item အမည်: ဘက်စုံသုံးကြီးမားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအမျိုးသားများအတွက်ခရီးသွားအိတ်
နောက်ထပ်ပုံစံများ ဖက်ရှင်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး, ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စတိုင်ခရီးသွားအိတ်
အရောင်: အနက်ရောင်, Grey က
Produto excelente! ဤအရာသည်ပစ္စည်းများကိုပျော်ရွှင်စရာဖြစ်စေသည် ... ကျေနပ်စရာကောင်းသည်။
ထက်ပိုသောငွေပမာဏသည် Всёсоответствуетописанию။ Оченьудобная။ Пришлобыстро, поставщикарекомендую။
ထုတ်ကုန်ကောင်း! စတိုးဆိုင်နှင့်ကောင်းသောဆက်သွယ်မှု! ကျွန်ုပ်သည်ဤကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဤဆိုင်ကိုအကြံပြုပါသည်။ ပေးပို့ခြင်းအချိန်သည်စဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင်အမိန့်ပေးခဲ့သည် - ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် (အိုင်ယာလန်) ကိုလက်ခံရရှိပါပြီ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်ရှည်လျားစွာပို့ဆောင်သော်လည်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ...
Оченьбыстраядоставка။ Заказывалмуж, всемдоволен။ Хорошая, добротнаясумка။ Спасибо!